Freshsales: Soojiid, Hawlgal, Xidho, iyo Hormarin Hagaag u ah Ganacsigaaga Hal Madal Iibineed | Martech Zone
Inta badan CRM iyo istiraatiijiyadda waxtarka iibinta ee warshadaha waxay u baahan yihiin isdhexgal, iswaafajin, iyo maamul. Waxaa jira heer guuldarro sare oo ku saabsan qaadashada qalabkan maxaa yeelay waxay carqalad ku tahay ururkaaga, inta badan waxay u baahan tahay la-taliyeyaal iyo horumariyayaal inay wax walba ka shaqeeyaan. Ma aha in la xuso waqtiga dheeriga ah ee looga baahan yahay gelitaanka xogta kadibna sir yar ama aan lahayn ama aragti ku saabsan safarka rajadaada iyo macaamiishaada.
Freshsales waa iibka CRM ee kooxaha aan dooneynin inay isku dhex wareegaan qalab badan. Freshsales waxay ku bixisaa xal iib ah 360-degree hal madal, marka waad awoodi kartaa:
Soo jiidasho midig ayaa u horseedaya ganacsigaaga
Ka qaybgal iyada oo loo marayo baraha taabashada badan
Close heshiisyo dhakhso leh
Kobcin xiriiro qiimo leh.
Noocyada 'Freshsales' Ku dar
Nala Xiriir - aragtida ah 360-macaamil ee macaamilkaaga oo leh astaamo bulsheed iyo taabasho kasta shaashad keliya oo leh kobcin muuqaal muuqaal ah.
Dhibcaha Lead Leading - gacanta ku hagaaji dhibcahaaga hogaanka oo ku dar Freshsales 'sirdoonka macmalka ah si aad ugu darajogto raadadka iyadoo lagu saleynayo waxqabadkooda iyo astaanta
Maamulka Territory - abuuro dhulal la mid ah qaab dhismeedka iibka ururkaaga. Si otomatig ah ugu wareeji wakiilada iibka saxda ah macaamiisha saxda ah.
Balan, Hawsha, Faylasha, & Qoraalada - jadwalka ballamaha, samee qoraallo deg deg ah, wadaag faylasha, oo aad iskaashi la sameyso koox hawlo
Muuqaalka Dhuumaha Iibinta - la soco horumarka heshiisyada furan hal aragti oo leh dhuumaha iibka ee muuqaalka ah oo aad kala shaandheyn karto oo aad kala sooci karto. Abuur dhuumo badan (soo galid, dibedda, e-commerce, iwm.). Isku xirku wuxuu awood kuu siinayaa inaad si toos ah ugu xirto rajada shaashadda.
Websaydhka & Raadinta Abka - la soco rajadaada oo ogow sida ay ula falgalaan websaydhkaaga ama alaabada dhijitaalka ah. Qorsheyso wada hadal caqli gal ah, kuna habboon, oo u adeegso si aad ugu hagaajiso dhibcaha hogaanka si aad ujeceshahay inaad u doorato hoggaamiyeyaasha kulul.
Jadwalka Waxqabadka - hel aragti jadwal ah oo ku saabsan waxqabadka rajada kasta, si kooxdaada wax iibisaa ay u soo xulato daqiiqadaha saxda ah isla markaana ay si dhakhso leh ugu xirto heshiisyada.
Smartform si loo hoggaamiyo - si toos ah ula soco mareegahaaga CRM-gaaga. Hesho macnaha wanaagsan ee hogaanka sida Freshsales si otomaatig ah u booqda booqashooyinka degellada, astaamaha warbaahinta bulshada, iyo inbadan.
Guji si aad u wacdo - ma jiro kharashka softiweer / qalab dheeri ah. Kaliya ku dhig wicitaanada hal guji gudaha Freshsales adoo adeegsanaya taleefanka ku dhex jira - oo leh dhammaan wicitaanada soo socda iyo kuwa baxayaba si otomaatig ah ayaad u qortey. Shakhsi ahaaneed dhammaan codkaaga iyo soo dhaweynta farriimaha.
Android iyo iOS Mobile App - hel aragtida 360 ° ee macaamilkaaga markaad la socoto barnaamijyada Freshsales Android iyo iOS.
Ka Warbixinta Waxqabadka Dibedda ogow inta wicitaan ee xayeysiinta ah ee ay sameeyeen wariye kasta oo iibiya inta lagu jiro waqti cayiman.
E-mayllada dir oo raadi - dir ama ka hel emayl midkood Freshsales ama macmiilka emaylkaaga, oo ka hel emaylka galka Sent ama Inbox ee labada barnaamijba. U dir emayl tiro badan adoo adeegsanaya sheybaareyaal shaqsiyan ah oo aad ula socoto waxqabadkooda raad raaca ololaha. Ku hel ogeysiisyada waqtiga-dhabta ah e-maylku furitaan iyo guji, oo qorshee habraacaaga xiga. Ku hirgeli DKIM emayllo si elektiroonig ah u saxeexan si loo horumariyo isu-gudbinta.
Ololaha Shaqada iyo Ololaha Iibka - Aalado howlaha soo noqnoqda, toosiya habsami u socodka, oo waxsoosaar badan la soo socodsiinta shaqooyinka caqliga badan. Dhis oo raadso ololeyaal emayl ku saleysan sharci si aad ugu dirto emayllada shaqsi ahaaneed rajadaada. Kicinta ficilada otomaatiga ah ee ku saleysan dhaqankooda.
Warbixinnada Iibka iyo Saadaalinta - adeegso warbixinnada caadiga ah ama sameyso warbixinno caadiya si aad uga soo saarto wixii xog ah CRM. Waxaad sidoo kale jadwal sameyn kartaa oo aad dhoofin kartaa warbixinnada isla markaana aad si dhakhso leh ula wadaagi kartaa kooxahaaga oo dhan. Iyadoo wareegga iibka iyo xawaaraha warbixinnada, waad ogaan kartaa muddada ay kooxdaadu ku qaadanayso inay xirto fursadaha. Aqoonso heerarka ay wakiiladaadu inta badan waqtigooda ku qaataan wareegga iibka.
Dashboards - fiiri warbixinno badan shaashad keliya oo leh dashboard warbixino toos loo habeyn karo. Raac xaaladda iibkaaga wakhti kasta iyada oo loo marayo jadwalka iyo xulashooyinka dhoofinta.
Socdaalka iyo Is-dhexgalka - Leaner oo dhaqsi hal-guurin xog ah oo laga keeno Salesforce, Zoho CRM, Insightly, Pipedrive, Salesforce IQ, ama kaliya CSV. Is dhexgal Freshchat, Freshdesk, G Suite, Qaybta, Muuqaalka, Zapier, Isdhaafsiga, Hubspot, Mailchimp, Office, oo leh iskudhaf wax soo saar badan oo soo socda!
Luqado badan - 10 luqadood ayaa hadda la hirgeliyay si ay u taageeraan saldhigga macaamiisha adduunka.
La socda - Waxaa lagu marti geliyay Mareykanka ISO 27001, SSAE16, iyo xarumaha xogta u hogaansanaanta HIPAA. Farsamooyinka gaarka ah ee Freshworks waa TRUSTe la aqoonsan yahay oo waafaqsan GDPR.
Saxeex Ku Noqo Akoon Freshsales Bilaash ah
Bixinta: Waxaan ahay a Freshsales xiriiriye.
Tags: Degree 360aisirdoonka macmalemayl badanCRMhaajiritaanka crmEmail MarketingFreshsalesHIPAAdhibcaha hogaankaluqado badanmaaraynta ololaha iibkawareegga iibkaKordhinta Iibkasaadaalinta iibkadhuumaha iibkawarbixinta iibkaxawaaraha iibkaiibinta otomaatiga shaqadaSSAE16